पद र कुर्सीका लागि होइन, मुक्तिका लागि आन्दोलन : अध्यक्ष प्रचण्ड « Rara Pati
पद र कुर्सीका लागि होइन, मुक्तिका लागि आन्दोलन : अध्यक्ष प्रचण्ड
२८ माघ, काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को प्रचण्ड–नेपाल समूहले प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोध गर्दै आज काठमाडौंमा वृहत शक्ति प्रदर्शन गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली असंवैधानिक ढङ्गले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भन्दै सो समूह गत पुस ५ गतेदेखि आन्दोलित छ । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी हाल मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचराधीन छ ।
सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संविधानमा प्रतिनिधिभा विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नरहेको जिकिर गर्दै संसद् पुनःस्थापना नभए आन्दोलनको आँधीबेहरी सिर्जना गर्ने चेतावनी दिए । उनले भने, ‘अहिलेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनको सुनुवाइ नभए शान्तिपूर्ण आन्दोलन हुँदै जनविद्रोह हुन्छ ।’
उनले सडकमा आएका जनताका आवाजलाई सुन्न आग्रह गर्दै जनताको आवाजलाई संवैधानिक निकायले पनि सुन्नुपर्ने जिकिर गरे । ‘शान्तिपूर्ण आन्दोलन विद्रोहमा गयो भने के हुन्छ ? आँधी आउँछ, हुरी चल्छ, कसैले थाम्न सक्दैन’, उनले भने, ‘हिजो हामी सानो समूहले विद्रोह गर्दा के भयो ? अब शान्तिपूर्ण विद्रोह ‘ग्रिन रिभोलुसन’ हुन्छ । शान्तिपूर्ण क्रान्ति हुन्छ ।’
नेकपामा विवाद देखिएसँगै ध्रुवीकरण शुरु भएको जिकिर गर्दै अध्यक्ष दाहालले पार्टीबाट बाटो विराएकाहरू ढिलोचाँडो आफूहरू भएकै ठाउँमा आउने बताए । उनले आफ्नो समूहमा फर्कनेको सूची निकै लामो रहेको दाबी समेत गरे ।
अहिलेको सङ्घर्ष केही व्यक्ति र पदका लागि नभएको प्रष्टीकरण दिँदै अध्यक्ष प्रचण्डले कुर्सीका लागि नभई जनताको मुक्ति र हितका लागि आन्दोलन गर्नुपरेको बताए । ‘विरोधीहरूले कुर्सीका लागि ‘यी बुढाहरू’ लागेको भन्ने गरेका छन्, तपाईहरूलाई पनि खै, कुर्सीकै लागि लडेका हुन् कि भन्ने परेको हुनसक्छ ।’ उनले भने ।
अर्का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले आधिकारिक नेकपा आफूहरू नै रहेको दाबी गर्दै सूर्य चिह्न आफूहरूले नै पाउने जिकिर गरे । ‘चुनाव चिह्न सूर्य हामीसँग छ । निर्वाचन आयोगलाई शंका छ भने ४४१ केन्द्रीय सदस्यलाई एकएक हेरेर निर्णय गर्नुपर्छ’, उनले भने । आयोगमा आफू पहिलो नम्बरको अध्यक्ष भनेर प्रधानमन्त्रीले गरेको दाबीको खण्डन गर्दै उनले प्रश्न गरे, ‘केपी ओलीले पहिलो अध्यक्ष हुँ भनेर धम्काएछन् । पहिलो अध्यक्ष भनेर कहाँबाट थाहा पाउने ? पार्टीको विधानबाट थाहा पाउने ? विधानमा पहिलो नम्बरको अध्यक्ष भनेर लेखिएको छैन । सर्कुलरमा लेखिएको छैन र निर्णयमा पनि छैन । कसरी पहिलो नम्बरको अध्यक्ष ?’
वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले आन्दोलनको आवाज नसुने जनआन्दोलनको आगो दन्किने चेतावानी दिए । प्रचण्ड र माधव नेतृत्वको नेकपा नै आधिकारिक पार्टी भएको जिकिर गर्दै उनले आयोगलाई आधिकारिकता छुट्ट्याउन गाह्रो परेको भए आफूहरूको प्रदर्शनलाई हेर्न आग्रह गरे ।
आफूहरू मुलुकको समृद्धिका लागि सडकमा आएको उल्लेख गर्दै उनले समाजवादी कृषि क्रान्ति कसरी गर्ने, समाजवादी उद्योगधन्दा कसरी सञ्चालन गर्ने र समाजवादी शिक्षा कसरी तयार गर्ने भनेर आफूहरू त्यसका लागि लागि परेको दाबी गरे । ‘हामी लोकतन्त्र, संविधान र गणतन्त्र तथा मुलुकको स्थायित्वका लागि लडिरहेका छौँ’, उनले भने ।
नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई बचाउन आन्दोलन गर्नुपरेको उल्लेख गर्दै भने, ‘पुस ५ गते गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सञ्चालन गर्नु र असंवैधानिक कदम असफल पार्न, संवैधानिक परिषद्को अवैधानिक बैठकबाट भएका नियुक्तिलाई असफल पार्न हामीले संघर्ष गरेका हौँ ।’
त्यस्तै स्थायी कमिटी सदस्य देवप्रसाद गुरुङले कम्युनिष्ट पार्टीबाट नेतृत्वमा आएका व्यक्तिबाट असंवैधानिक कदम गरिएकाले आम जनता आन्दोलनमा उत्रनुपरेको बताए । अर्का स्थायी कमिटीका सदस्य जनार्दन शर्माले लाखौँको बलिदानबाट प्राप्त संविधानलाई मिच्न नपाइने बताए । उनले भने, ‘जनताको आवाज सरकारले सुन्नुपर्छ, जनताको अवाजलाई नसुने जनविद्रोह हुने र उक्त जनविद्रोहले सङ्घीयता, गणतन्त्रविरोधीलाई सखाप पार्नेछ ।’
अर्का स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्तले नयाँ र क्रान्तिकारी पार्टी बनाउन सबैले खरो उत्रनुको विकल्प नभएको बताए । केन्द्रीय सदस्य रामकुमारी झाँक्रीले नेपाली नागरिक सार्वभौम अधिकारसम्पन्न भएको जिकिर गर्दै नागरिकको बोल्ने अधिकारलाई कसैले कुण्ठित गर्न नसक्ने बताइन् ।
सभाअघि राजधानीका विभिन्न पाँच स्थानबाट जुलुस निकालिएको थियो । माइतीघर, पुल्चोक, जमल, कुपण्डोल र लैनचौरबाट जुलुस भएको थियो । पाँचै स्थानको जुलुस सुन्धारामा पुगेर मूल जुलुसमा परिणत भएको थियो । सभाका लागि पुरानो बसपार्क, प्रदर्शनी मार्ग र भद्रकालीका बीचमा ‘टी’ आकारमा बस्न मिल्ने गरी मञ्च तयार गरिएको थियो ।
वृहत शक्ति प्रदर्शन